Shirkada Twitterka ayaa soo bandhigtay in Haakariska ay bartilmaansadeen qiyaastii 130 akoon… – Hagaag.com
Posted on 18 Luulyo 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Shirkada Twitter ayaa daaha ka qaaday in haakariska ay bartilmaansadeen qiyaastii 130 akoon intii lagu gudajiray weerarkii internetka ee lagu qaaday todobaadkan, kaas oo lagu jabsaday feylasha shakhsiyaad badan oo ka mid ah shaqsiyaad caanka ah iyo ururo.
Hackers-ka ayaa galay nidaamyada Twitter-ka gudaha si ay u afduubaan akoonada qaar oo ka mid ah dadka ugu muhiimsan ee barta, sida: murashaxa madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, Kim Kardashian, Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo bilyaneer Elon Musk, ka dibna u adeegsaday akoonada si ay u codsadaan lacagta dijitaalka ah.
Twitter ayaa bayaankeedii ugu dambeeyay ku sheegtay in kuwa jabsadayaasha ah ay awood u yeesheen in ay xakameeyaan “qayb yar” oo ka mid ah akoonada la beegsaday isla markaana ay ka soo diraan fariimaha bogogooda . Shirkaddu waxay intaa ku dartay inay waddo dadaalkeeda si ay uga jawaabto awoodda weeraryahannada helitaanka xogta akoonnada la beegsaday.
Akoonada caanka ah oo la jabsaday ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa heesaaga Kanye West, aasaasaha Amazon Jeff Bezos, maalgashadaha Warren Buffett, aasaasaha Microsoft Bill Gates iyo akoonada Uber iyo Apple. Twitterku waxay ku celcelisay inay la shaqeyneyso kuwa leh akoonnada ay saameeyeen weerarada.
Waaxda FBI-da ee San Francisco ayaa hogaamineysa baaritaan la xiriira burcad-Internet-ka, iyadoo dhowr xildhibaan ay sidoo kale codsadeen in loo sharraxo sida uu ku dhacay xadgudbka. Hay’adda fulinta sharciga ayaa sheegtay in kuwa weerarka internetka geystey ay ku dhaceen dhac ama wax isdaba marin, sidaasina la sheegay inay ku heleen 100 kun oo dollar oo lacagta cryptocurrency ah.
“Waxaan wali ku guda jirnaa qiimeynta tillaabooyinka muddada fog ee aan qaadi karno, “faahfaahin dheeri ahna waa la shaacin doonaa” sida ugu dhaqsaha badan, “ayay raacisay.